Chii Chiri Kukanganisa kweMicro vs. Macro-Influencer Strategies | Martech Zone
Ndeipi Mhedzisiro yeMicro vs. Macro-Influencer Strategies
China, Gunyana 14, 2017 Douglas Karr
Kufuridzira kushambadzira kurara kumwe kunhu pakati peshoko-remuromo muromo waunovimba naye uye chakabhadharwa mushambadziro wawakaisa pane webhusaiti. Vanokanganisa vanowanzo kuve nekugona kukuru kwekuvaka ruzivo asi huwandu mukugona kwavo kunyatso kukanganisa tarisiro pane sarudzo yekutenga. Kunyange iri zano rekufunga zvakanyanya, rekusvitsa vateereri vako vepamoyo pane kushambadzira kwemabhanhire, kushambadzira kwekumanikidza kuri kuramba kuchikwira mukuzivikanwa.
Nekudaro, pane kukakavara pamusoro pekuti mari yako yekudyara mune inosimudzira kushambadzira iri nani yashandiswa semari hombe yemari kune mashoma mashura - kukurudzira kukuru, kana kana yako yekudyara iri nani kushandisa pane yakawanda niche, yakanyanya kutarisisa vanokurudzira - ma micro influencers.
Mari hombe yakashandiswa pamacro-influencer inogona kudonha ikaita kubheja kukuru. Kana hombe bhajeti yakashandiswa pakati pevashoma-vanokonzeresa zvingave zvakaoma kubata, kurongedza, kana kuvaka iyo mhedzisiro iwe yaunoda.
Chii chinonzi Micro Influencer?
Ini ndaizoenzanisirwa seyakanyanya kukurudzira Ndine niche yekutarisa pakushambadzira tekinoroji uye ndinosvika kumusoro pamusoro pevanhu zviuru zana kuburikidza nehukama, webhu, uye email. Chiremera changu uye mukurumbira hazviwedzeri kupfuura zvinoonekwa zvemukati izvo zvandinogadzira uye; semhedzisiro, kana kuvimba kwevateereri vangu uye simba rekuita sarudzo yekutenga.
Chii chinonzi Macro Influencer?
MaMacro influencers ane hwakakura hwakawanda hunhu uye hunhu. Mukurumbira unozivikanwa, mutapi venhau, kana nyeredzi yemagariro enhau anogona kuve anokonzeresa (kana vakavimbwa uye vachifarirwa nevateereri vavo). Mediakix inotsanangura ichi chikamu zvine chekuita nepakati:
Iyo macro influencer pa Instagram inowanzo kuve nayo mukuru kupfuura zviuru zana vateveri.
Iyo macro influencer paYouTube kana Facebook inogona kutsanangurwa sekuve nayo vangangoita 250,000 vanyori kana kuda.
Mediakix yakaongorora anopfuura mazana manomwe mazana manomwe akatsigirwa Instagram zvinyorwa kubva gumi nematanhatu emhando dzinoshanda pamwe chete nemacro influencers uye ma micro influencers kuti vaone kuti ndedzipi nzira dzainyatsoita. Vakagadzira iyi infographic, iyo Hondo yeVanokurudzira: Macro vs. Micro uye svika pamhedziso inonakidza:
Chidzidzo chedu chinoratidza kuti macro influencer uye micro influencer mashandiro anenge akaenzana kana uchiongorora zvichibva chete pachiyero chekubata. Pamusoro pezvo, takaona kuti macro influencers anokunda maererano nezvakakwana zvawada, makomenti, uye kusvika.
Ini ndakakwanisa kusvika kuna Jeremy Shih ndikabvunza iwo mubvunzo unopenya - dzoka pakudyara. Mune mamwe mazwi, kutarisa kupfuura kubatanidzwa uye kuda, paive nemusiyano unoyerwa muzviratidzo zvekuita kwakadai sekuziva, kutengesa, kukwirisa, nezvimwe. Jeremy akapindura akatendeka:
Ini ndinogona kutaura kuti hupfumi hwekuyera huri kutamba pano nepfungwa yekuti zviri nyore (nguva shoma uye bandwidth yakasimba) kushanda nevashoma, vane hunyanzvi pane kuyedza kurongedza mazana kana zviuru zvevanokurudzira zvishoma kuti vawane kusvika kumwe chete. Uyezve, CPM inotanga kudzikira paunenge uchishanda pamwe neakakura anokurudzira.
Zvakakosha kuti vatengesi vachengete izvi mupfungwa sezvavanotarisa kukurudzira kushambadzira. Nepo kuwanda kwekubatana pamwe neanoyevedza micro-influencer mushandirapamwe unogona kuburitsa kwakakura zvakanyanya pazasi mutsara, iko kuedza kunodikanwa kunogona kunge kusiri kukodzera kudyara munguva nesimba. Sezvo nechinhu chero chipi zvacho mukushambadzira, zvakakosha kuyedzwa uye kugadzirisa nemaitiro ako emushandirapamwe.
Ini ndinofunga zvakakoshawo kuti uzive kuti izvi zvaingoenderana ne Instagram kwete mamwe masvikiro senge kublogi, podcasting, Facebook, Twitter, kana LinkedIn. Ini ndinotenda chishandiso chinoonekwa senge Instagram chinogona kukanganisa mhedzisiro yeongororo yakadai seiyi zvakanyanya mukufarira vevakakurumbira.
Tags: American mamvemve ciebhurokadaniel wellingtongillettechakagadzirwainfographicInstagrammacro simbazvideomicro kufuriranordstromsephora
Gumiguru 7, 2017 pa 2:19 AM
Vanofurira hapana mubvunzo chikamu chakakosha kwazvo cheshambadziro nzira, kunyanya mune B2B mamiriro. Kune B2B inotenga mutongi wezve sarudzo, hutungamiriri hwekufunga hweiye mutengesi ndiyo kiyi. Kana munhu anokwanisa kuvimbisa mutengesi zvinowedzera kutendeseka. KuThoughtStarters (www.thought-starters.com) tashanda pamwe nemakambani mazhinji epasirese tichivabatsira kutsanangura & kumhanyisa mapindiro avo ekukurudzira & tinoona kuti kazhinji vanokundikana kusaziva vese vanokanganisa. Semuenzaniso: Kune anotungamira wepasirese mutengi takaona kuti Academia kubva kumayunivhesiti anotungamira inogona kushandiswa seyakakosha kukurudzira. Isu takavaka chirongwa chakabatana navo & kubudikidza neizvi mutengi akakwanisa kuvhura nzira nyowani dzisina kufungidzirwa kare muhurongwa hwavo hwekukurudzira hwekuita & ndokutangawo kukohwa ROI. Nekudaro rakakosha kumakambani kuti aone vanobatirana vanogona kuvabatsira kuti vawane mari yakawanda yezvavanokurudzira maitiro ekubatana.